Utdị uru ahụ gbasara eriri nchekwa nchekwa nwere ọgụgụ isi nke enwere ike ịkwa, kpara ma saa - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Utdị uru ahụ gbasara eriri nchekwa nchekwa nwere ọgụgụ isi nke enwere ike ịkwa, kpara ma saa
Na mmepe ngwa ngwa nke ngwaahịa elektrọnik a na - eyi ngwa ngwa, ndị mmadụ nọ na ngwa ngwa mkpa nchekwa nchekwa ngwaọrụ nwere ezi mgbanwe, scalability, arụmọrụ dị elu, nkasi obi na ngwa ngwa. Ngwaọrụ ike nchekwa, nke di nfe, obere nha ma di iche-iche na nhazi, aburula ebe ndi mmadu nyocha, ma were ya dị ka usoro dị irè iji dozie ndụ batrị dị iche iche nke ngwaahịa elektrọnik wearable.
Ugbu a, Enweela ọganihu dị ukwuu na mmepe nke otu ụzọ nwere ike isi dị ka lithium ion batrị, lithium sọlfọ batrị, galvanic batrị na supercapacitor. N'etiti ha, AZB nwere uru nke ikike dị elu (825 ma / g), ọgaranya ngwaọrụ, ọnụ ala, nchekwa dị elu na ezigbo mgbanwe, ma enwere ike iji ya dị ka ebe nchekwa nchekwa maka ngwaahịa eletrọniki wearable. Otú ọ dị, fibrous mmiri na-adabere na zinc batrị enweghi ikike dị elu na ihe cathode kwụsiri ike, na mmepụta nke batrị ndị na-emepụta ihe na-emepụta ugbu a adịkarịghị enye akụrụngwa akụrụngwa dị mkpa maka nhazi akwa, na-eme ka o sie ike ịkọpụta ihe.
na nso nso, ndị nyocha si Institute of Chemical Materials of The Chinese Academy of Engineering Physics, sitere n'ike mmụọ nsọ siri ike na ọrụ REDOX nke polydopamine (PDA), mepụtara eriri nchekwa ike nwere ike ịkọ, kpara ma na-eji akwa PDA dị ka ihe eji arụ ọrụ na nano-binder. Igwe nchekwa nchekwa ahụ na-egosikwa mgbanwe dị elu na ike dị elu, ma enwere ike iji ya kwadebe akwa textiles wearable, nke na-enye ụzọ ọhụrụ maka mmepe nke ngwaọrụ eletrọnị a na-eyi akwa. E bipụtara nsonaazụ ya na Advanced Functioned Materials na aha ya "Bioinspired Interface Design nke Sewable, Weavable, na Fosacha Fiber Zinc na-emepụta maka Wearable Power Textiles."
Ihe eserese nke nkwadebe nke textiles nchekwa ike dabere na AZB na-agbanwe agbanwe yana njirimara arụmọrụ nke PCNF
Ndị nnyocha ahụ họọrọ eriri carbon nanotube (CNF) dị ka mkpụrụ carbon ma tinye CNFs na ngwọta nke dopamine, nke mere na dopamine guzobere polydopamine (PDA) n'elu CNF, na CNF ndị a na-ekpuchi PDA jere ozi dị ka cathode (PCNF). A kwadebere PCNF na zinc waya n'ime akwa site na mkpuchi iji mee textiles nchekwa nchekwa. Ejiri mmanya polyvinyl kpuchie ya (PVA) gel electrolyte, enwere ike iji akwa ahụ mee ihe dị iche iche na ngwaọrụ eletrọniki.
Tụnyere nke electrolyte eguzogide na electrochemical arụmọrụ nke PCNF electrode n'okpuru dị iche iche okpomọkụ ọgwụgwọ okpomọkụ
Iji wepu dopamine fọdụrụnụ ma mụbaa oke nke quinones nwere ọrụ oxidative na PCNF, a na-emeso PCNF samples polymerized na-ekpo ọkụ na okpomọkụ dị iche iche. Nsonaazụ gosiri na PCNF electrode nwere ezigbo nguzogide electrolyte na arụmọrụ electrochemical mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ bụ 300 ℃.
Ọrụ electrochemical na FT-IR na XPS na-egosi PCNF electrode na okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke 300 ℃
Ndị ọrụ nyocha ahụ ji eriri nchekwa nchekwa ahụ banye n'ụkpụrụ akọwapụtara nke textiles nchekwa nchekwa site na igwe ịkwa akwa, nke nwere ike inye ike dị ike maka ngwaahịa eletrọniki dị iche iche n'okpuru nrụda na ịsacha ọnọdụ.
Nhazi usoro na ngwa ngwa nke nchekwa ihe ike Textiles dabere na AZBs na-agbanwe na ịkwa akwa
Ọganihu ọhụrụ na arịa ọbara ọbara na-ejikọ na eriri na polylactic acid